Shopify bu onye ohuru nke Network Network meputara | Site na Linux
Febọchị ole na ole gara aga e mepere Network mepụtara ọhụụ site a blog post na ụlọ ọrụ Shopify, nke mepụtara otu n'ime usoro ntanetị kachasị na e-commerce maka nzukọ nke ịkwụ ụgwọ na ire ahịa ma na ụlọ ahịa na ntanetị, esonyela dị ka otu n'ime ndị sonyere na nzukọ nke Mepee mepụtara Network (OIN), bụ usoro okike Linux na-echebe site na ikikere patent.
Ekwesiri ighota na ikpo okwu Shopify na-eji Ruby on Rails kpuchie ya, ụlọ ọrụ ahụ na-ahụkwa ngwanrọ mepere emepe dị ka isi ihe na azụmaahịa ya. Site na isonye na OIN, ụlọ ọrụ ahụ na-ezube igosipụta ntinye aka ya maka ihe ọhụrụ ma nyere aka chebe megide mwakpo nke patent na-emetụta usoro sistemụ Linux.
“Ulo oru Shopify abughi ndi oru iji wulite ulo ahia na ntanetị, kamakwa usoro ngwọta nke azụmahịa, gụnyere ịkwụ ụgwọ nhazi site na Shopify Payments na mgbazinye ego site na Shopify Capital, tinyere ndị ọzọ. E-azụmahịa nyiwe, fintech na ego ọrụ ụlọ ọrụ kwesịrị iburu n'uche nke uto na onye ndu nke Shopify, nke e wuru na-emeghe iyi software kemgbe ya igba egbe, "kwuru Keith Bergelt, CEO nke Open Invention Network. "Anyị nwere ekele maka ntinye aka nke Shopify na isonyere OIN na igosipụta ntinye ya maka ihe ọhụrụ na enweghị iwe nke ikike ikikere na sistemụ Linux."
“Na Shopify, anyị wuru nyiwe anyị na Ruby na Rails. Anyị na-ahụ sọftụwia mepere emepe dị ka ntọala dị mkpa maka azụmaahịa anyị, "Robert Guay, Onye Ọkachamara Amamihe Na-ahụ Maka Ngwongwo Shopify kwuru. “Site na isonyere Open Invention Network, anyị etinyela aka na patenting abụghị mbuso agha na kernel Linux yana sọftụwia mepere emepe dị nso. Anyị kwenyere na nkwa a ga-akwalite ihe ọhụụ ma nyere ndị ọchụnta ego na ndị mmepe iwu iwu na ntọala na-emeghe emeghe n'eleghị anya n'ihe egwu nke ịgba akwụkwọ. Anyị na-agba ume ka nyiwe e-commerce niile na-eche echiche na-aga n'ihu, ndị na-ere ahịa na ụlọ ọrụ ndị ọzọ ịme otu ihe.
Ndi otu OIN kwenyere ka ha ghara itinye aka na ikike ha ha nweere onwe ha inye ikike iji teknụzụ nwere ikike rụọ ọrụ metụtara usoro okike Linux. Ndị òtù OIN gụnyere azụmahịa karịrị puku atọ na narị atọ ndị bịanyere aka na nkwekọrịta ikikere iji kekọrịta ikike.
N'etiti ndị isi sonyere nke OIN, na-enye nguzobe nke otu ikikere nke na-echekwa Linux, ụlọ ọrụ dịka Google, IBM, NEC, Toyota, Renault, SUSE, Philips, Red Hat, Alibaba, HP, AT&T, Juniper, Facebook, Cisco , Casio, Huawei, Fujitsu, Sony na Microsoft.
Companieslọ ọrụ ndị a bịanyere aka na ha ịbanye na ikike ọrụ nke OIN nwere maka mgbanwe nke ịghara ịgba akwụkwọ maka iji teknụzụ eji rụọ ọrụ na Linux. Tinyere ihe ndị ọzọ, dị ka akụkụ nke isonyere OIN, Microsoft bufere ndị OIN ikike iji ihe karịrị 60 nke ikikere ya, na-etinyeghị iji ha megide Linux na ngwanrọ na-emeghe.
Nkwekorita n'etiti ndị otu OIN metụtara naanị na nkesa nke nkesa ndị dabara n'okpuru nkọwa nke usoro Linux ("Linux System").
Na mgbakwunye na ọrụ ndị na-abụghị ọgụ, maka nchekwa ọzọ n'ime OIN, etolitela ọdọ mmiri, nke gụnyere ikike nchọpụta nke ndị Linux metụtara.
OIN patent group gụnyere ihe karịrị 1300 patenti, gụnyere OIN Hands bụ otu ikikere, gụnyere otu n'ime teknụzụ nrụtụ aka izizi na-eke ọdịnaya weebụ dị ike nke na-atụ anya usoro omume dịka Microsoft's ASP, Sun / Oracle's JSP, na PHP.
Onyinye ọzọ dị mkpa bụ nnweta na 2009 nke 22 ikikere Microsoft, nke e rere na mbụ na AST Consortium dị ka patenti na-emetụta ngwaahịa "oghere mmalite". Ndị otu OIN niile nweere onwe ha iji ikikere ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Shopify bu onye ohuru nke Network Network mepere emepe
CPU-X na CPUFetch: 2 bara uru iji lelee akụkụ nke CPU